Ireo Vehivavy Afrikana Manao Blaogy · Global Voices teny Malagasy
Ireo Vehivavy Afrikana Manao Blaogy
Voadika ny 08 Oktobra 2018 6:40 GMT
“Isika ihany ve no mamaritra ny tenantsika sa ny famaritan'ireo hafa antsika”, hoy Keeper manontany tena mikasika an'ireo eritreriny no sady manontany raha toa ny misy maripamantarana azy “… namboarina ho an'ny tenako ho valinteny iray amin'ny an-tanantohatra ankapobeny izay mametraka ny vehivavy afrikana eo amin'ny zanatohatra ambany indrindra? Sa io endrika ivelan'ilay maripamantarana ahy izay mbola tao mandrakariva saingy tsy nila velively nanamafy ny aminy?
Tamin'ny alalan'ny fandatsaham-bato nandritra ireo fifidianana tao Liberia sy ny fanambaràna izay Filoham-pirenena vaovao, miresaka ny fanorenana an'i Liberia i Black Looks izay ny ady sivily vao haingana nisy tao dia mifamatotra mivantana tamin'ny fakàna an-kery ny tany nataon'ireo metisy Afrikana Amerikana na fividianana tamin'ny sanda tsy misy dikany tamin'ireo mpitarika ny vahoaka teratany. Liberia tamin'ny taonjato faha-18. Io dia mitondra aminà toedraharaha izay, amin'ny endriny maro, tsy misy hafa amin'ny an'ireo firenena afrikana hafa voazanaka.
Ankalazain'i Black Looks ihany koa ny nanolorana ny Loka Iraisam-pirenena mikasika ny Fahalalahana Maneho Hevitra ho an'i Beatrice Mtetwa, zimbaboeiana mpisolovava mpiaro zon'olombelona, avy amin'ny Komity mpiaro ny mpanao gazety.
Mandritra izany fotoana izany, raha jerena ny krizin'ny lalàmpanorenana akehitriny izay mandrahona ny hamotika an'i Kenia, miantso an'ireo mpiray tanindrazana aminy i Chanuka mba voalohany indrindra hamaky sy hisaina ny vontoatin'ny Lalàmpanorenana Keniana mialohan'ny handatsaham-bato amin'ny fitsapankevibahoaka ho avy ary mba tsy ho voasarik'ireo mpanao politika Keniana izay tsy mitahiry ao ampony ny tombontsoa ho an'ny Keniàna.
Nasongadin'i Boitumelo Mofokeng mikasika ny adihevitra manodidina ny Fanapahankevitra faha1325 noraisin'ny Filankevi-Pilaminan'ny Firenena Mikambana, izay fanapahana sambany noraisin'ny filankevitra mikasika manokana ny fidonan'ny ady amin'ireo vehivavy, ny fandraisana anjaran'ireo vehivavy amin'ny famahàna ny fifandonana ary amin'ny fandriampahalemana maharitra. Hentitra i Boitumelo: tsy tokony ilaina akory ny mikasika an'io famahàna olana io raha toa ny ONU ka fikambanana tsy manilikilika sy liam-pivoarana hatrany amboalohany. Tsipihany fa mihevaheva ny fampiharan'ny fitovian'ny lahy sy ny vavy, toy izay porofoin'ny isa tsy mitovy eo amin'ireo vehivavy misahana andraikitra mpanampy sy ny mpanohana ao anatin'ny fikambanana ary vokany, very ny fahafahana manome ohatra tsara ho an'ireo governemanta izay kasainy harenina. Faranany amin'ny filazàna amin'ny ONU fa: “na io miaraka aminay, fa tsy mandeha irery! Henoy ny feonay!…”
Tsy mahakasika fotsiny ny fiarovana tontolo iainana ny angovo azo amin'ny masoandro, hoy Afromusing, manoratra momba ireo orinasa izay mahazo tombony dolara an-tapitrisany maro noho ny teknolojia azo havaozina.
Na dia tsy nahomby tamin'ny ankapobeny aza ny Andro natokana tsy hisian'ny fiarakodia natao vao haingana tao Johanesbourg, noho ny rafitra fitaterambahoaka tsy dia sahaza loatra, milaza i Bronwyn fa tokony ho zavatra tsara ny dokambarotra manodidina ny tontolo iainana ary manitrikitrika izy hoe tokony hitohy hanoratra hatrany momba io olana saropady io ireo media ary hitaky tamberinandraikitra amin'ireo mpitondra.
Omen'i Nneka ny valiny iray mendrika ho tsaroana ho anà olona iray mihambohambo niteny taminy indray mandeha manao hoe ”Tiako ny tovovavy toa anareo, satria ianareo tsy mametraka fanontaniana”.